Myanmar Signed the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (CRC) – Ministry of Foreign Affairs
Withaview to further promoting and protecting the rights of children in the country, Myanmar signed the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (CRC) on 28th September 2015.
The signing ceremony was held at the United Nations Headquarters in New York. On behalf of the Government of the Republic of the Union of Myanmar, Union Minister for Foreign Affairs U Wunna Maung Lwin signed the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. Also present on the occasion were Ms. Leila Zerrougui, Special Representative of the Secretary-General of the United Nations for Children and Armed Conflict and Mr. Santiago Villapando, Chief of Treaty Section, Office of Legal Affairs of the United Nations.
Signing this Optional Protocol is in line with Tatmataw’s policy of no underage recruitment into the armed forces, and shall contribute its ongoing efforts on the prevention of underage recruitment.
To date, there are 161 states parties to the said Optional Protocol.
၁။ မြန်မာကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးကို ပိုမို မြှင့်တင် ကာကွယ်ရန်အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံသည် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင်‌့အရေးများဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲ အခြေပြစာချုပ်သို့ (၂၈-၉-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
၂။ ယင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို နယူးယောက်မြို့၊ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များ ပါဝင် ပတ်သက်မှု တွင် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင်‌့အရေးများဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲ အခြေပြစာချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်မှ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စလိုင်လာဇာရိုဂီ၊ ကုလသမဂ္ဂဥပဒေရေးရာရုံး၊ စာချုပ်များဌာနအကြီးအကဲ မစ္စတာဆန်တီရေဂိုဗီလာပန်ဒို တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၃။ မြန်မာတပ်မတော်အတွင်း အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များ လုံးဝ စုဆောင်းခြင်းမပြုရန်ဆိုသည့် တပ်မတော်၏ မူဝါဒနှင့်အညီ နောက်ဆက်တွဲအခြေပြစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များအား စုဆောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တပ်မတော်၏ လက်ရှိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အထောက်အကူပြုစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဖော်ပြပါ အခြေပြစာချုပ်သို့ ယနေ့အထိ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၆၁)က စာချုပ်ဝင် နိုင်ငံများအဖြစ် ပါဝင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်